Ronald Koeman Oo Ka Hadlay Jawaabtii Adkayd Ee Uu Kala Kulmay Lionel Messi & Pep Guardiola Oo Uu Ka Dalbaday Inuu Ka Caawiyo Sidii Uu Leo Usii Joogi Lahaa - Gool24.Net
Ronald Koeman Oo Ka Hadlay Jawaabtii Adkayd Ee Uu Kala Kulmay Lionel Messi & Pep Guardiola Oo Uu Ka Dalbaday Inuu Ka Caawiyo Sidii Uu Leo Usii Joogi Lahaa
Tababaraha cusub ee Barcelona ayaa markii ugu horreysay ka hadlay walaaca cusub ee kasoo kordhay mustaqbalka xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi, kaas oo kulan ay laba habeen ka hor yeesheen u sheegay inuu ‘bannaanka kooxda uga dhow yahay gudaha’, taas oo ku abuurtay walaac ah inay suurtogal tahay inuu ka tegayo.
Ronald Koeman oo ka shaqaynaya sidii uu kabtanka kooxda usii haysan lahaa, waxa uu xidhiidh la sameeyey tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola oo ay saaxiibbo dhow yihiin, waxaanu weydiiyey talooyin ku saabsan sida lagu qancin karayo Messi ee loogu sii hayn karayo Camp Nou.
Waxa uu tababaraha reer Netherlands rumaysan yahay in Messi oo uu kusii hayo Camp Nou uu noqonayo seeska iyo bar-bilowga dhismaha uu ku samaynayo kooxda oo kala daadsanaan badan ka muuqato, waxaanu markii ugu horreysay la hadlay warbaahinta intii ka dambaysay kulankii uu la yeeshay Messi, waxaanu yidhi: “Messi waa guuleysto dhab ah.”
Waxa uu intaas kaddib qirtay inuu la hadlay Guardiola oo uu ka codsaday inuu ka caawiyo sidii uu Lionel Messi ugu qancin lahaa inuu Barcelona sii joogo, waxaanu yidhi: “Waxaan aad ugu dhowahay Pep Guardiola, haddana xidhiidh ayaan la leeyahay. Pep wuxuu ii sheegay in Messi doonayo inuu guuleysto, wuxuu doonayaa inuu wax walba ku guuleysto. Haddii aanu ku guuleysanin, aad ayuu u cadhoonayaa. Waxaan aad u rajaynayaa inaan la shaqayn doono isaga.”
Tababare Ronald Koeman, waxa uu ka sheekeeyey sida uu Lionel Messi ugu yahay qorshihiisa, waxaanu yidhi: “Waa inaan xaqiijiyo in Messi uu awoodi doono inuu si fiican ula shaqeeyo kooxdan iyo inuu dareemo muhiim. Waa kabtanka kooxda.
“Waa inuu xirfaddiisa ku dhamaysto halkan. Messi waa Barcelona, Barcelona waa Messi.”